FarfallaFRC-280P Automatic ထမင်းပေါင်းအိုး (2.8 Liters) - ပန်းရောင် | အွန်လိုင်း SHOP.COM.MM တွင် ၀ယ်ယူမည်
Farfalla FRC-280P Automatic ထမင်းပေါင်းအိုး (2.8 Liters) - ပန်းရောင်
ဆန်ခြင်ခွက်နှင့် ထမင်းခူးခပ်ရန် ဇွန်း
Farfalla ပေါင်းအိုးတွေကို သဘောကျပါတယ်။ ဈေးတန်ပြီး အရည်အသွေးလည်းအရမ်းမိုက်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
This is an excellent rice cooker of Farfalla. It is cheaper than most, and doesagood job. နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် FRC-280P Automatic ထမင်းပေါင်းအိုး (2.8 Liters) - ပန်းရောင်